အမေဇုန် ဇနီးမောင်နှံ အပြီးတိုင် ကွာရှင်းပြတ်စဲ၊ ကမ္ဘာပေါ်၌ အများဆုံး ကွာရှင်းစရိတ်ပေးရ - Yangon Media Group
အမေဇုန် ဇနီးမောင်နှံ အပြီးတိုင် ကွာရှင်းပြတ်စဲ၊ ကမ္ဘာပေါ်၌ အများဆုံး ကွာရှင်းစရိတ်ပေးရ
နယူးယောက်၊ ဧပြီ ၅
အမေဇုန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တည်ထောင်သူ ဘီဇိုနှင့် ၎င်း၏ ဇနီးဟောင်းမက္ကင်စီတို့သည် ဧ ပြီ ၄ ရက်ကတရားဝင်အပြီးအပြတ် ကွာရှင်းခဲ့ပြီး လုပ်ငန်း၏စတော့ ဒေါ်လာ ၃၆ ဘီလီယံခန့်အားပေး အပ်လိုက်ပြီးဖြစ်သည်ဟု ဧပြီ၅ ရက်သတင်းများအရ သိရှိရသည်။ လုပ်ငန်းစတော့ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အာကာသ စူးစမ်းလေ့လာရေးကုမ္ပဏီ Blue Origin အားမစ္စ တာဘီဇိုက ခွဲဝေရယူသွားသည်ဟု ဇနီးဖြစ်သူ မက္ကင်စီက ထုတ်ဖော် ပြောဆိုလိုက်သည်။
ဂျဇ်(ဖ်)ဘီဇိုသည် (၅၅)နှစ်ရှိပြီး ဝတ္ထုရေးဆရာမမက္ကင်စီသည် (၄၈)နှစ်ရှိပြီဖြစ်ကာ ၁၉၉၃ခုနှစ်က လက်ထပ်ခဲ့ပြီး သားသမီး လေး ဦးထွန်းကားခဲ့သည်။ အိမ်ထောင်သက် ၂၅ နှစ်ရှိခဲ့သည်။ ဘီဇိုသည် အမေဇုန်ကုမ္ပဏီအား ဆီယက်တဲလ် မြို့တွင် ၁၉၉၄ ခုနှစ်က စတင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အွန်လိုင်းမှ တစ်ဆင့်ပြည်တွင်းလက်လီ ဈေးကွက်တွင်အောင်မြင်သော ကုမ္ပဏီ ကြီးဖြစ်ခဲ့သည်။ အမေဇုန်သည် ဈေးကွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဒေါ်လာ ၈၉ဝ ခန့်ရှိသည်။
စတော့ရှယ်ယာပေါက်ဈေးအရ လက်ရှိတွင် ၃၅ ဒသမ ၆ ဘီလီယံဒေါ်လာဖြစ်နေသည်။ ဂျက်ဖ်ဘီဇိုသည် အမေဇုန် ရှယ်ယာ ၁၂ ရာခိုင်နှုန်းပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ မက္ကင်စီသည် Forbes မဂ္ဂဇင်းဖော်ပြချက်အရ ပြင်သစ်အလှကုန်လုပ်ငန်း L’ oreal ၏အမွေခံသမီးဖရန်စစ်ဘက်တာကုဒ်မီယာနှင့် Walmart’s ကုမ္ပဏီကြီးမှ အဲလစ်ဝေါလ်တာတို့နောက် တတိယ မြောက်ဘီလျံနာတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ ဂျက်ဖ်ဘီဇိုသည် ယင်းမဂ္ဂဇင်းဖော်ပြချက်အရ ဒေါ်လာ ၁၁ဝ ဘီလီယံ ကြွယ်ဝသူဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့နှစ်ဦးသည် ဇန်နဝါရီလကပင် ကွာရှင်းခဲ့ကြပြီး ယခုအပြီးတိုင် ကွာရှင်းပြတ်စဲကြခြင်းဖြစ်သည်။
မက္ကင်စီသည် ၎င်း၏ဘဝတွင် အကောင်းဆုံးအဖော်မွန် ဖြစ်သူနှင့် မိခင်တစ်ဦးကဲ့သို့ပင် မိမိသဘောထားပါသည်ဟု ဂျက်ဖ်ဘီဇိုက ၎င်း၏တွစ်တာတွင် ရေးသားခဲ့သည်။ မိမိအားချစ်မြတ်နိုးမှုများကို အမြဲသတိတရဖြစ်နေမှာ ပါဟုလည်း ဆက်လက်ရေးသားလိုက်သည်။
”ကျွန်တော့်အပေါ် ကြင်နာသိတတ်ခဲ့မှု၊ အကူအညီပေး ခဲ့မှုများကို ကျေးဇူးတင်ပြီး နောင်လည်းမိတ်ဆွေကောင်းများ အဖြစ် ကလေးများရဲ့မိဘတစ်ဦးအဖြစ်ပါ ဆက်လက်စောင့် ရှောက်သွားမှာပါ”ဟုလည်း ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည်။
Ref : The Bangkok Post
အာဖဂန်နစ္စတန် အနောက်ပိုင်းခရိုင်ကို တာလီဘန်တို့ တိုက်ခိုက်၊ ဒါဇင်ပေါင်းများစွာသေဆုံး
လစ်ဗျားစစ်တပ်များ ထရီပိုလီမြို့အထိ ချီတက်ရန် စစ်တပ်အကြီးအကဲ ညွှန်ကြားထား
ဒစ်ဂျစ်တယ် နည်းပညာနှင့် အင်တာနက်အား ဘေးကင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်မည့် အချက်များအား နိုင်ငံတစ်??
အဆိုတော်/ သရုပ်ဆောင် စန္ဒီမြင့်လွင်နှင့် ကိုသီဟလွင်တို့၏ စုလျားရစ်ပတ် လက်ထပ်ထိမ်းမြားပွဲ န??
စင်ကာပူသို့ ကင်ဂျုံအန်နှင့် ဒေါ်နယ်ထရန့် ရောက်ရှိ
မိမိတို့နိုင်ငံသည် ကျန်းမာရေးထက် ပညာရေးကို အလေးထားသောနိုင်ငံဖြစ် အမျိုးသားကျောင်းဆရာမျာ??
ပြည်ပတွင် ကစားမည့် အစီအစဉ်ကို AFE တရားဝင် ကန့်ကွက်